Umsebenzi omnye uswelekile, abathathu besibhedlele eSpain ngengozi yesityalo senyukliya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » Umsebenzi omnye uswelekile, abathathu besibhedlele eSpain ngengozi yesityalo senyukliya
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • News Sustainability • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Iziko lamandla enyukliya laseAscó eCatalonia, eSpain
Umzi-mveliso we-Ascó wawuphandelwe ukuvuza kwemitha kwi-Unit 1 reactor ngoNovemba ka-2007.
Iiyunithi ezisixhenxe zokucima umlilo kunye neenqwelo ezine zongxamiseko zonyango ziye zabalekiselwa kwiziko lamandla enyukliya laseAscó ECatalonia, Speyin ngokuhlwanje malunga nentsimbi yesi-7 pm ixesha lasekhaya emva kokuvuza okukhulu kwekharbon diokside kuxelwe kwiziko.
Omnye wabasebenzi abachaphazelekayo ubhubhile, kwaye abathathu baye balaliswa esibhedlele ngokukhawuleza emva kokuba abasemagunyeni basekuhlaleni bakrokrela ukuba yintlawulo egqithisileyo kwinkqubo yokukhusela umlilo.
Abasebenzi bexesha likaxakeka baye bakhusela indawo kwaye bakhupha amaxhoba.
Inkqubo yokucima umlilo kwisityalo "ihlupheke ukuvuza kwe-CO2 echaphazela abantu abane," abasemagunyeni baseCatalan babhengeza.
Abasebenzi abathathu abasindileyo kule ndawo ivuzayo bakwisibhedlele esikufutshane naseMóra d'Ebre.
Kwakungekho kukhutshwa kwemitha kwesi siganeko, ngokutsho kwesityalo kunye nabasemagunyeni basekhaya.
Isityalo saseAscó ngaphakathi ECatalonia iye yaphandwa ngokuvuza kwemitha kwi-Unit 1 reactor ngoNovemba 2007, okubangele ukugxothwa komlawuli wayo.